China Isikhwama segama lesikhwama somnikazi wekhadi Ikesi lebhizinisi I-ID Isikhwama sefolda yecala lesikweletu sesikole sehhovisi lebhizinisi ukusetshenziswa nsuku zonke kwabesilisa besifazane Abakhiqizi Nabahlinzeki |I-Camei Ele&Stationery
Igama lesikhwama somnikazi wekhadi lebhizinisi I-ID yesikhwama sefolda yecala lesikweletu sesikole sehhovisi lebhizinisi ukusetshenziswa kwansuku zonke kwabesilisa besifazane
Into NO.: 2611 Igama lomnikazi wekhadi
Material: PU isikhumba
Umbala:Onsundu, obomvu, fuchsia
Ukupakisha: 1pcs/PP isikhwama
20 GP Ubukhulu:260000PCS
40 GP Ubukhulu:560000PCS
Lesi sikhwama sekhadi esiphathwayo se-Ca-Mei salabo abafuna ukuhlehlisa amaphakethe abo.Ngeke uzisole ngokuthenga lesi sikhwama sekhadi.
Ngocwaningo lwethu, phatha kalula futhi ukhokhe kalula uba yimfashini, ukheshi akusadumile njengakuqala, isikhwama semali sendabuko esikhulu ephaketheni lakho asisafanele ukuphila kwethu kwanamuhla.Ngakho sithola izindlela ezingcono zokuphatha nokuvikela amakhadi akho nemali.Abaklami be-Ca-Mei bafaka umbono wabo wokusungula impilo kulesi sikhwama, senzelwe ukwanelisa abantu abafuna ukuphatha ukheshi namakhadi abo kalula, inhloso yethu yokwenza impilo ibe ngcono.
Umthamo omkhulu- Le ncwadi yamakhadi ebhizinisi iza namakhasi ayi-10 anemikhono ephindwe kabili ye-PVC enezinhlangothi ezimbili kanye namaphakethe aseceleni angu-2, ingabamba amakhadi ebhizinisi angafika kwangu-50 noma amakhadi esikweletu (kuye ngokuthi ukujiya kwekhadi).Umkhawulo kasayizi wekhadi ofanelekile: 3.6" x 2.2"Isebenza kumakhadi anothi, amakhadi ebhizinisi nawomuntu siqu, i-ID namakhadi esikweletu, njll.
Iyaphatheka futhi ifanelekile- Ubukhulu: 105 * 70 * 8 MM.Iphrofayili emincane kanye nedizayini enesisindo esincane yenza lesi siphathi sekhadi lebhizinisi siphatheke kalula.Gcina amakhadi akho ebhizinisi emahle, ecocekile futhi eseduze ngaso sonke isikhathi.
Kulula ukuhlola futhi uthole amakhadi- Imikhono yekhwalithi ephezulu ye-PVC iwubufakazi bokuthi inikeze ukucaca okuphelele ukuze uyibuke kalula.Amakhasi ayi-12 ngokuphelele.Ikhasi ngalinye linezikhala ezi-3 ezikuvumela ukuthi ubeke amakhadi emuva ngemuva njengoba amakhasi anezinhlangothi ezimbili ezibonakala.
Izinto ezihlala isikhathi eside- Ikhadi lethu lebhizinisiumhleliyenziwe nge-PU engangeni emanzini futhi engagqoki, iqiniswe ngemiphetho evaliwe kanye nemikhono eqinile yekhadi lebhizinisi le-PVC.
Ukubonakala kochwephesheI-e- Umnyama wakudala nokubukeka okuhle nokuchachambile, umnikazi wekhadi wesitayela sencwadi angakuthakasela nethuba.Kuyisipho esihle kakhulu somndeni wakho, abangani, amaklayenti, ozakwabo, noma njengesikhumbuzo senkampani!
Unisex- Uma kubhekwa idizayini yabo eshelelayo kanye nokwakhiwa kwesikhumba okushelelayo, lezi izikhwama ezincane ezidumile zabesifazane nabesilisa.Benza imibono emihle yezipho kubahambi empilweni yakho!Ilungele abantu bayo yonke iminyaka.
Inqubo yezobuchwepheshe- Ipuleti lokuhlola ngaphambi kokubeletha- Ukusika impahla- Ukukhishwa kwezinto ezibonakalayo- Iglue- Ukuthunga- Ukupakisha
Okwedlule: Isikhwama sokuhlanganisa esishisayo esincane esinepeni lokuvala uziphu elinwebekayo nekesi eliqinile lepensela
Olandelayo: Isikhwama sesandla esivaliwe siyabenyezela isikhwama sepulasitiki esisobala esigcwele isikhwama sezimonyo se-PVC esithwala ogwini lokuthenga
Isikhwama sehlombe esinebhande eliguquguqukayo lebhande...